Bayern Munich vs Liverpool – Dabinnada Laysku Maleegayo, Shaxda Macquulka Ah, Dhaawacyada, Ganaaxyada, Rikoodhka Kulamadoodii Hore Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey – Cadalool.com
Bayern Munich vs Liverpool – Dabinnada Laysku Maleegayo, Shaxda Macquulka Ah, Dhaawacyada, Ganaaxyada, Rikoodhka Kulamadoodii Hore Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Caawa ayaa si rasmi ah ay u dhamaystirmi doonaan siddeedda kooxood ee ugu dambayn ku loollami doona wareegyada xiga ee tartanka Champions League, marka ay Bayern Munich soo kala dhamaadaan Liverpool, sidoo kalena ay Barcelona iyo Lyon midkood libinta helo.
Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku martigelinaysa Liverpool lugta labaad ee wareegga 16-ka ee tartanka Champions League oo ciyaartii hore ay kusoo kala baxeen barbarro goolal la’aan ah.
Maadaama aanu labada kooxood midkoodna dhalinin kulankii Merseyside, waxay mid walba halgan u geli doontaa sidii ay ula hormari lahayd dhalinta goolasha mar haddii aan laga yeelaynin in sidii ciyaartii hore ay goolal la’aan ku kala hulleelaan.
Kooxda martida loo yahay ee uu hoggaaamiyo tababare Niko Kovac waxa u taalla shaqo adag mar haddii aanay ciyaartii ay martida ahayd aanay gool kasoo dhalinin Liverpool, waxaanay u baahan tahay in 90-ka daqiiqadood ee ciyaarta ay xaqiijisato guul iyadoo dhinaca kalena dejinaysa qorshihii ay iskaga qaban lahayd Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino oo ah kuwa ayaa guusha ka sugto Liverpool.
Mane iyo Joel Matip oo fursado dahabi ah ka khasaariyey ciyaartii hore ee barbarraha, ayaa il-gaar ah ay ku hayn doonaan ciyaartoyga Bayern Munich, iyagoo kaashanaya ciiddooda, iyo taageereyaashooda, niyaddana ay u dejinayso rikoodhka ay ka haysato afartii jeer ee ugu dammbeeyey ee ay kooxo Ingiriis ah ka hor yimaaddeen oo dhamaantood ay libinta kala hoyatay. Waxa kale oo gacan siinaya bandhigga liita ee Liverpool ee afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Champions League ee ay dibedda uga baxday garoonkeeda oo ay guul-darrooyin lasoo laabatay.
Inta ciyaartu socoto, Liverpool waxay raadsan doontaa hal fursad oo ay gool ku dhaliso gudaha garoonka Allianz Arena, haddii taasi dhacdana waxay Bayern Munich u baahan doontaa inay dhaliso laba gool, haddii Reds ay laba dhalisana, Bavaria waxay ku qasbanaanaysaa inay saddex dhaliso. Kooxda tababare Kovac oo ku guul-darraysatay inay xattaa hal gool si fiican u toogato goolka Liverpool saddex usbuuc ka hor, waxay nafta u huri doontaa sidii ay u gaadhi lahayd semi-finalka Champions League oo ay ugu dambaysay May 2015 oo ay Barcelona kasoo reebtay.
Hammigeeda hadda, waxa Bayern Munich shidaal u ah rikoodhka fiican ee ay ka haysato kulamada garoonkeeda oo 26-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee ay kooxuhu ku qaabishay 25 ka mid ah waxay ku dhalisay ugu yaraan hal gool, waxaana goolasha ugu badan ka yimaaddeen Robert Lewandowski oo 23 gool ka dhaliyey 22 ciyaarood oo Champions League oo Allianz Arena uu ku saftay, waxaana 10 ka mid ah ciyaarahaasi ay ahaayeen wareegyada isreeb-reebka sida wareega 16-ka, quarter-finalka iyo semi-finalka.
Bayern Munich iyo Liverpool waxay iskaga mid yihiin koobabka Champions League ee ay haystaan oo min shan jeeer ah, laakiin sannadihii ugu dambeeyey ayay Munich ahayd naadi xooggan oo kulamada ugu dambeeya yimaadda halka Liverpool ay xili ciyaareedkii tegay ay timid muddo ka badan toban sannadood.
13-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee dhamaan tartamada, Bayern Munich waxay guuleysatay 11 ka mid ah oo kulankii ugu dambeeyey ay ku burburisay Wolfsburg oo ay 6-0 dhoola-tus ah ku jiidhay, balse lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Champions League, saddex ka mid ah ayay guuleysatay, saddexna barbar-dhac ayay gashay.
Dhinaca kooxda martida ah ee Bayern, Liverpool waxay lumisay hoggaaminteedii horyaalka Premier League oo ay kala wareegtay Manchester City, waxayse kusoo laabatay jidka guusha kaddib kulamo xidhiidh ah oo barbarro la gashay Manchester United iyo Everton ka hor intii aanay Burnley 4-2 kaga adkaanin.
Liverpool oo xili hore ka hadhay tartanka FA Cup iyo sidoo kale Carabao Cup oo ay Man City ku guuleysatay, waxay laba bilood oo ay booska ugu sarreeya Premier League ku fadhiday ay kursiga ku wareejisay Man City oo hal dhibic ka horreysa, hase yeeshee waxay eeganayaan fursad kasta oo Pep Guardiola iyo wiilashiisu iska lumiyaan si ay ugu soo laabtaan hoggaanka.
Geesta kalena, Liverpool oo finalkii Champions League ee xili ciyaareedkii hore ay Real Madrid ku garaacday khaladaad ay samaysay iyo dhaawac uu ku baxay Mohamed Salah qaybtii hore, ayaa waxay wax walba u samaynaysaa sidii ay Bayern Munich uga naxsan lahayd xilli horeba, isla markaana ay ugu gudbi lahayd wareegyada xiga iyadoo iska ilaalinaysa inay mar kale ku celiso khaladaadkii ku dhacay finalkii hore.
Liverpool dhibaato badan ayaa haleeshay xili ciyaareedkan gaar ahaan tartanka Champions League marxaladdii Groupyada, waxaana ay guul-darrooyin lasoo laabteen saddex ciyaarood oo ay marti u noqdeen kooxaha Napoli, Red Star Belgrade iyo PSG, waana rikoodh liita oo Bayern Munich faa’iido u noqon kara.
Haddii ay kooxda Klopp doonayso inay kusii jirto Champions League, waxay u baahan tahay inay hurdada ka kacaan saddexdeeda dilaa ee Mane, Firmino iyo Salah maadaama aanay wax goolal ah kusoo dhalinin kulamadii ay martida noqdeen ee Napoli, PSG iyo Red Star Belgrade, waxaana kulamadan oo dhan ay dhashatay hal gool oo kaliya oo rikoodhe ahaa oo ciyaartii PSG uu dhaliyey James Milner.
Inkasta oo ay kaalinta labaad kaga soo baxday Group-kii dhimashada, haddana lixdii ciyaarood ee ay yeelatay kaliya laba kulan ayay guuleysatay, saddexna waa laga badiyey halka ciyaartii Bayern Munich ay barbarro gashay.
Ciyaarta: Bayern Munich vs Liverpool
Tartanka: Champions League, lugta labaad ee wareegga 16-ka
Waqtiga: 11:00 PM – Saacadda Geeska Afrika
Garsooraha: Daniele Orsato oo u dhashay waddanka Talyaaniga
Riix 2 si aad usii akhrisato: